Izikhawu Zokumaketha Ziyanwetshwa, Ziyancipha! | Martech Zone
Ngenkathi ngiphethe umnyango wezokumaketha oqondile, ngangijwayele ukutshela amaklayenti ukuthi isikhathi okumele basithathele ukunakekelwa kwethemba sasihlobene ngqo nesikhathi esithathayo ukuhamba usuka ebhokisini leposi uye kudoti. Ngisakholelwa ukuthi lokho kuliqiniso. Angazi ukuthi ngikholelwa ukuthi ukunakwa kwabathengi kunciphile eminyakeni edlule, njengoba abathengisi abahlulekile bebekhala ngakho, noma kunjalo.
Ngikholwa ukuthi ukukhula kwama-mediums kuguqule amaklayenti aba sezingeni elikhulu lokunaka, hhayi ngaphansi. Lapho sibona khona lokhu ukuthandwa kwezinhlelo ezinjenge Uhlu luka-Angie, Izingqungqulu, Ukubhuloga, Amazon Ukubuyekezwa, imiphakathi eku-inthanethi, njll. Abantu benza imizamo eminingi ekuxoxeni ngemikhiqizo nezinsizakalo abazithandayo nabazizondayo. Lolo hlobo lokunakwa lubaluleke kakhulu kunokubuka indawo yamasekhondi angama-60 kuSuperbowl. Kukhona ibhizinisi elichumayo elizungezwe impendulo yabathengi.
Lezi zinkundla zezikhalazo zabathengi zinomthamo omkhulu wezimoto. Isibonelo esisodwa esimangazayo ukungena ibhulogi lapho umlobi aqopha khona futhi athumela umzamo wakhe wokukhansela i-akhawunti yakhe ye-AOL. Kutholwe amakhulu ezinkulungwane zamahithi. Cabanga ukuthi hlobo luni lwemali i-AOL obekufanele ilukhokhele lolu hlobo omuhle ukunaka! Malini imali yokukhangisa elahlekile kulokhu kuqoshwa okukodwa?
Kwesinye isibonelo, uDavid Berlind uthumela okuqoshiwe kocingo lwakhe lwemizuzu engu-13 naye T-Mobile, akhokhe nobani (ngaphandle kwe-akhawunti yakhe ejwayelekile) yokufinyelela okungenantambo esikhumulweni sezindiza futhi akakwazanga ukuxhuma. AbakwaT-Mobile benqabile ukubuyisa imali ayikhokhile.
Ngokusho kombiko omusha wePew, amaphesenti ayi-8 wabasebenzisi be-inthanethi, noma abantu abadala baseMelika abayizigidi eziyi-12, bagcina ibhulogi. Amaphesenti angamashumi amathathu nesishiyagalolunye wabasebenzisi be-intanethi, noma abantu abadala baseMelika abangaba yizigidi ezingama-57, bafunda amabhulogi - ukwanda okuphawulekayo kusukela ekwindla ka-2005.
Iphuzu lalokhu ukuthi abathengi ukunakwa kwezikhala kuyanda, hhayi ukwenza isivumelwano. Kodwa-ke, ukunaka kwabo kugudlukela kokuphakathi, ukukhangisa okungenamqondo, kanye ne-PR futhi kuphendukela emphakathini nasezwini lomlomo.
Njengomakethi, kungumsebenzi wakho ukufunda ukubandakanya abathengi ngokusebenzisa lobu buchwepheshe obusha kanye nemimoya. Uma uzama ukulwa nabo, ngeke nje uphumelele. Abathengi banake kakhulu kunakuqala, ngemithombo engcono kunangaphambili.
Tags: ukunakwaisikhathi sokunakaubude
Jul 26, 2006 ngo-11: 21 PM
Nasi esinye isibonelo esihle, lesi esivela kuThikithiMaster:
Jul 27, 2006 ngo-3: 16 PM
Futhi omunye ovela eBhange LaseMelika!